Shina 100% landihazo lamaody akanjo volo PY-YR007 fanamboarana sy orinasa | Pinyang
Akanjo vatan-jazakely 100% landy
--Nahoana no mifidy antsika?
1.Lala samihafa miaraka amina endrika lamaody sy loko isan-karazany hahafeno ny fepetra takinao.
2.Ny kalitao avo sy ny serivisy tsara indrindra.
3.Small habeny azo ekena.
5.Offer tolotra manampy ny logo anao.
--Inona ny MOQ?
Ho an'ny vokatra samihafa, lamba hafa, ny habetsahana manokana dia ho fahasamihafana, manolora ny mpivarotra ny zavatra takinao, hanamarina ny MOQ ho anao izahay.
--Ahoana no hahalalana ny kalitaon'ny be indrindra?
Alohan'ny hamokarana dia halefanay ny santionany PP, aorian'ny fanamafisanao azy, dia hanomboka ny vokatra izahay.
--Ahoana ny fonosana?
Izahay dia mametaka ny fonosana kitapo PP raha tsy misy fepetra takiana aminao, raha mila fonosana tsara tarehy ianao, ampahafantaro anay, hanoro ny fonosana mety na namboarina ho endrikao izahay.
--Fomba ahoana no hanaterana ny fandefasana ahy?
Azontsika atao ny mandefa ny entana amin'ny alàlan'ny express, amin'ny rivotra, amin'ny lamasinina na amin'ny ranomasina. Hanolotra anao ny fomba fandefasana entana tsara indrindra arakaraka ny habetsahan'ny filaminana izahay.
Manaraka: Fararano sy ririnina fehin-kibo amin'ny ririnina zazakely suit PY-YR005
Akanjo fohy fihinanan-jaza fohy lava PY-YR006
Fararano sy ririnina fehin-kibo amin'ny ririnina Baby Body Suit ...
Akanjo mafana miakatra amin'ny landihazo amin'ny zazakely PY-YR001
Akanjo 0-12 Volana Mandrakotra Zaza PY-YR010